रुसले परमाणु सम्पन्न ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र हान्यो, कति भयो क्षति ? भिडियो सहित — Imandarmedia.com
रुसले परमाणु सम्पन्न ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र हान्यो, कति भयो क्षति ? भिडियो सहित
काठमाडौं। युक्रेनमा आक्रमण थालेको दुई महिना पुगेपछि रुसले शक्ति प्रदर्शन गर्न परमाणु सम्पन्न अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको प्रहार गरेपछि अमेरिका सहित उसका साझेदार देशहरुमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
यो परमाणु सम्पन्न अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र आफ्नो निसानामा सफल परीक्षण गरेको छ। अब यसले युक्रेन मात्र नभएर अमेरिका सम्म मार हान्न सक्ने छ। यो शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र परीक्षणपछि पुटिनले भनेः हाम्रा दुश्मन दुईपटक सोच्न बाध्य हुनेछन्।
राष्ट्रपात पुटिनले भिडियो सनदेशमा भनेका छन। यो शक्तिशाली क्षेप्यास्त्रको परीक्षणसँगै राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले दुश्मनले रुसविरुद्ध कुनै पनि कदम चाल्न अगाडि अब दुईपटक सोच्न बाध्य हुने बताएका छन्।
रोयटर्सका अनुसार ‘सरमत अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र’को परीक्षण रुसले पहिलोपटक गरेको हो। यो क्षेप्यास्त्र उत्तर पश्चिमी रुसको प्लेसेत्स्कबाट छाडिएको थियो। ६ हजार किलोमिटरको दुरी पार गर्दै यो क्षेप्यास्त्र लक्ष्यमा पुगेको थियो।
यसबीचमा परमाणु क्षमताको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि रुसले साँच्चै यो हतियार प्रयोग गर्नसक्छ भन्ने संकेत दिएको छ। यद्यपी युक्रेन मामिलामा पश्चिमा राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप नभएसम्म रुसले यस्ता हतियार प्रयोगमा नल्याउने पनि बताउँदै आएको छ।
त्यस्तै, रुसले युरोपेली युनियनमा आबद्ध दुई राष्ट्रका ३६ कूटनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला गरेको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमलाको विरोधमा पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला मस्कोले पछिल्लो कदम चालेको हो।
रुसी विदेश मन्त्रालयले २१ बेल्जियम र १५ हल्यान्ड्सका कूटनीतिज्ञहरूलाई ‘पर्सना नन ग्रेटा’ जारी गरेको छ। उनीहरूलाई देश छाड्न दुई साताको समय दिइएको छ।
मस्कोले लक्जमवर्गका राजदूतलाई बोलाएर आफ्ना राजदूतलाई देश निकाला गरेको विषयमा विरोध जनाएको गरेको छ। त्यसको बदलामा लक्जमवर्गका राजदूतलाई देश निकालाको निर्णय गर्न सक्ने रुसले चेतावनी दिएको छ।
युक्रेनमाथि रुसी हमलाको आलोचना भइरहेका बेला यो महिना रुस र ईयूका केही राष्ट्रले एक अर्का देशका राजदूतलाई निकाला गरेका छन्।
त्यस्तैअमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाले रुसलाई धम्क्याउन युक्रेनी भूमिको प्रयोग रोके मस्कोले युक्रेनमाथिको सैन्य कारबाही रोक्ने एक वरिष्ठ रुसी अधिकारीले बताएका छन्।
रुसी विदेश मन्त्रालयलका वरिष्ठ अधिकारी अलेक्सी पोलिसचुकले रुसी सञ्चार माध्यम ताससँगको कुराकानीमा सो विचार व्यक्त गरेका हुन्।‘आफ्ना कार्यहरू पूरा भएपछि विशेष सैन्य कारबाही समाप्त हुनेछ।
दोनबासको जनसंख्याको संरक्षण, युक्रेनको निशस्त्रीकरण र नेटो देशहरूले कब्जा गरेको युक्रेनी भूभागबाट रुसलाई आउने खतराको अन्त्य ती कार्य हुन् ’, उनले भने।
नेटोले युक्रेनी भूभागबाट रुसलाई कसरी धम्क्याएको छ भन्ने बारेमा उनले कुनै विवरण दिएनन्। युक्रेनमाथिको कारबाही योजनबद्ध ढंगले अगाडि बढेको र ‘उसले आफ्ना सम्पूर्ण योजना पूरा गर्ने’ उनले बताए।
युक्रेनले नेटोमा आवद्ध हुन चाहेपछि र पश्चिमा राष्ट्रले पनि युक्रेन नेटोमा आवद्ध हुनसक्छ भनेपछि रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको थियो।
युक्रेनी भूमिबाट आफूलाई कुनैपनि खतराको महसुस हुन नहुने र युक्रेन पश्चिमा राष्ट्रको संगठनमा आवद्ध हुन नहुने रुसी माग रहेको छ।